Myanmar Font in iPhone | U.N.O.B
Myanmar Font in iPhone
Downloads, I.T & Knowledge, UNOB
အခု လောလောဆယ် အချိန်မှာ Browser ၃ခု App Store ထဲမှာတွေ့ပါတယ်။ Free Version တွေ စမ်းပြီးသုံးကြည့်ပါ။ ကိုယ်နဲ့ အဆင်ပြေမယ့် တစ်ခုတော့ တွေ့မှာပါ။
iPhone ရဲ့မူလ Safari Browser က Helvetica Font ကလွဲရင် support လုပ်မထားတဲ့ အတွက်ကြောင့် ဥပမာ Zawgyi Font လိုမျိုး မြန်မာစာတွေ့ဖတ်လို့မရပါဘူး။ အစားထိုး Font တွေ သုံးနေကြပေမယ့် အဲဒါတွေက Native font မဟုတ်ပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်စာ A,B,C,D တွေ အားလုံးက လက်ကွက်နေရာခြင်းတူနေတာကြောင့် လုပ်လို့ရပါတယ်။ မြန်မာစာကြတော့ အဲလို အစားထိုးလို့ မရတဲ့အတွက်ကြောင့် Internet Browser တစ်ခုအသစ်လုပ်ပြီး မြန်မာ Font ကို Default အနေနဲ့ထားပေးလိုက်တဲ့အခါ အဲဒီ Browser သုံးရင်တော့ မြန်မာစာတွေ မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
iPhone သုံးနေတဲ့ မြန်မာ အားလုံးရဲ့ အခက်အခဲကိုဖြေရှင်းပေးလိုက်တာက iBrowser MM လို့ခေါ်တဲ့ iPhone App တစ်ခုပါ။ Safari အစားထိုး မြန်မာ Browser လို့ ပြောရင်လည်းရပါတယ်။ Facebook လိုမျိုး Gtalk, Gmail စတဲ့ Application တွေကိုပါ အဆင်ပြေအောင် MM Browser က လုပ်ပေးထားပါတယ်။ iPhone သုံးနေတဲ့ မြန်မာမာများ မြန်မာစာနဲ့ ဖတ်ချင်ရင် iTune Store သို့မဟုတ် iPhone App store မှာ iBrowser MM လို့ ရှာပြီး ထည့်သွင်းလို့ရပါတယ်။ သတင်းကောင်းကတော့ Free Version ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Version 4.0 နဲ့ အထက်ကိုသာ Support လုပ်ထားပါတယ်။ Jailbroken v.4 အောက်ကသူများအတွက် update လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ iPhone iOS 4.1 က Jailbreak နဲ့ Unlock လုပ်ဖို့ မလွယ်သေးပါဘူး။ Unlock လုပ်သုံးနေတဲ့ iPhone သမားများကို update လုပ်ဖို့ အကြံမပြုလိုပါဘူး။ သေချာနားမလည်ပဲ Update လုပ်မိရင် Lock ပြန်ဖြစ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
zawlatt December 11, 2012 at 6:02 am Reply
siyin August 18, 2012 at 12:57 pm Reply
i couldn’t find iMYANMAR browser. How can i find it. it’s look like remove from app store.
Administrator August 19, 2012 at 8:10 pm Reply
hlayte Cho March 27, 2012 at 10:02 pm Reply
thank you so much! its very useful
but i updatedanew version , its LOCK again:(
Aung December 13, 2011 at 6:05 pm Reply
Than Naing March 14, 2011 at 5:47 pm Reply
iClarified – Apple News – AT&T Makes Calling and Texting Japan Free Until March 31st
AT&T has announced that its making calling and texting to Japan free from March 11th through March 31st.
nay wynn tun November 16, 2010 at 9:25 pm Reply
Thank you ko htun linn
Than Naing October 20, 2010 at 1:40 pm Reply
moses October 19, 2010 at 8:47 pm Reply
THAT’S GOOD IT’S HELP ALOT
LeaveaReply to Than Naing Cancel reply
Personal Cloud အ ကြောင်း သိကောင်းစရာ
Smart Devices: ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ Smart Phone, Smart TV, Smart Home, Smart , smart တွေ ပုံတိုက်နေတဲ့ အချိန်မှာ
Paul Freiberger and Michael Swaine တို့ ရေးသားထားတဲ့ စာအုပ်ကို အခြေခံပြီး Apple Computer နဲ့ Microsoft သမိုင်းကြောင်းကို
D5 Conference (Steve Jobs & Gates)
Microsoft Chairman Bill Gates , Apple CEO Steve Jobs တို့နှင့် Interview အစီအစဉ်ကို wall Street
Zawgyi Unicode Installer(Burmese) Windows 7/Vista 32-64 bit compatible (write/view) Zawgyi Font (viewable only) After downloaded, Double Click